ADY AMIN’NY FAKANA AN-KERINY :: Ho arahi-maso manokana ireo voafonja • AoRaha
ADY AMIN’NY FAKANA AN-KERINY Ho arahi-maso manokana ireo voafonja
Noresahina nandritra ny Filankevitry ny minisitra, afak’omaly, ny momba ny ady amin’ny fakàna an-keriny. Ankoatra ny fankasitrahana ny mpitandro filaminana tamin’ny fahatrarana ireo mpaka an-keriny, tany Toamasina, dia nanome baiko manokana handraisana fepetra ny Filoham-panjakana mpisolo toerana, Rakotovao Rivo.
Hisy ny fanendrena mpitsara manokana iray izay tsy hisahana afa-tsy ny fakàna an-keriny. Nahazo baiko hanara-maso tsirairay an’ireo voafonja voa-rohirohy tamin’ny fakàna an-keriny ihany koa ny tale jeneralin’ny Fandraharahana ny fonja.
Teo aloha, nisy mpitsara iray tao amin’ny Sampana manokana misahana ny fakàna an-keriny na ny CME ka rehefa misy ny tranga fakàna an-keriny vao miditra an-tsehatra io mpitsara io miaraka amin’ny mpitandro filaminana.
Taorian’ity Filankevitry ny minisitra, afak’omaly, ity anefa dia tapaka fa hisy ny fanendrena mpitsara iray hiandraikitra manokana ny CME. “Tsy hisahana afa tsy ny raharaha fakàna an-keriny io mpitsara io”, hoy ny loharanom-baovao teo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana.
Vokatry ny famotorana nataon’ny pôlisy sy ny zandary manodidina ny tranga fakàna takalon’aina maro dia mihamafy ny fanahiana amin’ny fandraisan’ireo olona voarohirohy momba ny fakàna an-keriny anjara na dia efa any am-ponja aza.